Eksodho 38 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Ashaninka Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Emberá (Northern) Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Galician Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hiri Motu Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Motu Mutauro Wemasaini WekuJamaica Mutauro Wemasaini wechiBelgian French Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiDutch Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiGreek Mutauro Wemasaini wechiPortuguese Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wechiSwiss German Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuAustria Mutauro Wemasaini wokuBolivia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCosta Rica Mutauro Wemasaini wokuCroatia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuEl Salvador Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuGhana Mutauro Wemasaini wokuGuatemala Mutauro Wemasaini wokuHonduras Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuIreland Mutauro Wemasaini wokuIsrael Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKenya Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMadagascar Mutauro Wemasaini wokuMalawi Mutauro Wemasaini wokuMalaysia Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuMozambique Mutauro Wemasaini wokuMyanmar Mutauro Wemasaini wokuNew Zealand Mutauro Wemasaini wokuNicaragua Mutauro Wemasaini wokuNigeria Mutauro Wemasaini wokuPanama Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSlovakia Mutauro Wemasaini wokuSlovenia Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Mutauro Wemasaini wokuSweden Mutauro Wemasaini wokuTaiwan Mutauro Wemasaini wokuThailand Mutauro Wemasaini wokuUruguay Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZambia Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Navajo Nepali Nias Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Pennsylvania German Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Punjabi (Roman) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uzbek Uzbek (Roman) Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zulu
Atari yezvibayiro zvinopiswa (1-7)
Mudziyo wemhangura wekuisira mvura yekugeza (8)
Kuverengwa kwezvinhu zvepatebhenekeri (21-31)
38 Akagadzira atari yekupisira zvibayiro yemubayamhondoro. Yakanga iine mativi mana akaenzana, yakareba makubhiti* mashanu, yakafara makubhiti mashanu, uye yakakwirira makubhiti matatu.+ 2 Akabva agadzira nyanga dzayo pamakona ayo mana. Nyanga dzayo dzakanga dzakagadzirirwa pairi, chiri chinhu chimwe chete. Akazoiisa yese mhangura.+ 3 Pashure paizvozvo akagadzira midziyo yese yeatari, migomo, mafoshoro, ndiro, maforogo, nemidziyo yekuisira madota. Akagadzira midziyo yayo yese nemhangura. 4 Akagadzirirawo atari sefa yakaitwa nemhangura yakarukana-rukana pasi pemupendero wayo ichisvika nechepakati payo. 5 Akaumba marin’i mana pamakona mana pedyo nesefa yemhangura, kuti abate mapango. 6 Pashure paizvozvo akagadzira mapango emubayamhondoro akaaisa mhangura. 7 Akabva apfekera mapango acho mumarin’i aiva kumativi eatari kuti ashandiswe kuitakura. Akagadzira atari yacho yakaita sebhokisi remapuranga rakavhurika. 8 Akabva agadzira mudziyo wemhangura wekuisira mvura yekugeza+ nechigadziko chawo chemhangura; akashandisa magirazi* evakadzi vakanga vakarongwa kushumira pasuo retende rekusanganira. 9 Akabva agadzira chivanze.+ Kurutivi rwakatarisa kumaodzanyemba rwechivanze, akagadzira maketeni anorembera akagadzirwa nejira reshinda chena yakakoswa, akareba makubhiti 100.+ 10 Paiva nembiru 20 nezvigadziko 20 zvemhangura, uye zvekukochekera zvembiru nezvekuzvibatanidza nazvo* zvaiva zvesirivha. 11 Uyewo kuchamhembe kwaiva nemaketeni anorembera akareba makubhiti 100. Mbiru dzawo 20 nezvigadziko zvadzo 20 zvaiva zvemhangura. Zvekukochekera nezvekuzvibatanidza nazvo* zvaiva zvesirivha. 12 Asi kurutivi rwekumavirira, maketeni anorembera akanga akareba makubhiti 50. Paiva nembiru 10 nezvigadziko zvadzo 10, uye zvekukochekera nezvekuzvibatanidza nazvo* zvaiva zvesirivha. 13 Rutivi rupfupi rwakatarisa kumabvazuva rwaiva makubhiti 50. 14 Kurudyi rwepekupinda napo kwaiva nemakubhiti 15 emaketeni anorembera, aine mbiru nhatu nezvigadziko zvitatu. 15 Uye kuruboshwe rwepekupinda napo muchivanze kwaiva nemakubhiti 15 emaketeni anorembera, aine mbiru nhatu nezvigadziko zvitatu. 16 Maketeni ese airembera achitenderera chivanze akanga akagadzirwa nejira reshinda chena yakakoswa. 17 Zvigadziko zvembiru dzacho zvaiva zvemhangura, zvekukochekera nezvekuzvibatanidza nazvo* zvaiva zvesirivha, uye mbiru dzacho dzakanga dzakaiswa sirivha nechepamusoro padzo, uye zvekusungisa mbiru dzese dzechivanze zvaiva zvesirivha.+ 18 Keteni repekupinda napo muchivanze rakanga rakarukwa neshinda yebhuruu, shinda yepepuru,* shinda tsvuku, nejira rakagadzirwa neshinda chena yakakoswa. Rakanga rakareba makubhiti 20 uye rakakwirira makubhiti 5, rakaenzana nemaketeni anorembera echivanze.+ 19 Mbiru dzacho ina nezvigadziko zvadzo zvina zvaiva zvemhangura. Zvekukochekera zvadzo nezvekudzibatanidza nazvo* zvaiva zvesirivha, uye nechepamusoro padzo dzakanga dzakaiswa sirivha. 20 Hoko dzese dzetende retebhenekeri nedzechivanze kumativi ese dzaiva dzemhangura.+ 21 Zvinotevera ndizvo zvinhu zvakashandiswa pakugadzira tebhenekeri, iyo tebhenekeri yeChipupuriro,+ izvo zvakanzi naMozisi zviverengwe, sebasa revaRevhi+ vaitungamirirwa naItamari+ mwanakomana wemupristi Aroni. 22 Bhezareri+ mwanakomana waUrai, mwanakomana waHeri, wedzinza raJudha akaita zvese zvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. 23 Aiva naOhoriyabhi+ mwanakomana waAhisamaki wedzinza raDhani, aiva mhizha, aigona kumenda nekuruka neshinda yebhuruu, shinda yepepuru, shinda tsvuku, neshinda chena yakanaka. 24 Goridhe rese rakashandiswa pabasa rese renzvimbo tsvene rakanga rakaenzana negoridhe remupiro unovheyeswa,+ matarenda* 29 nemashekeri* 730 anoenderana neshekeri renzvimbo tsvene.* 25 Uye sirivha yevaya vakanga vaverengwa muungano yaiva matarenda 100 nemashekeri 1 775 anoenderana neshekeri renzvimbo tsvene.* 26 Munhu mumwe nemumwe akanga akaverengwa aiva nemakore 20 zvichikwira, akauya nehafu yeshekeri raienderana nehafu yeshekeri renzvimbo tsvene*+ uye vese vaisvika 603 550.+ 27 Zvigadziko zvenzvimbo tsvene nezvigadziko zveketeni zvakagadzirwa nematarenda esirivha anosvika 100; zvigadziko 100 zvakanga zvakaenzana nematarenda 100, tarenda rimwe richigadzira chigadziko chimwe chete.+ 28 Achishandisa mashekeri 1 775, akagadzira zvekukochekera zvembiru, akaisa sirivha nechepamusoro padzo, akadzibatanidza. 29 Mupiro* wemhangura waiva matarenda 70 uye mashekeri 2 400. 30 Akashandisa mupiro uyu kugadzira zvigadziko zvesuo retende rekusanganira, atari yemhangura, sefa yayo yemhangura, midziyo yese yeatari, 31 zvigadziko zvese zvechivanze, zvigadziko zvepekupinda napo muchivanze, nehoko dzese dzetende retebhenekeri nehoko dzese dzetende+ rechivanze.
^ Kureva, simbi yakakwenenzverwa zvakasimba kuti ipenye segirazi.
^ Kana kuti “nemarin’i azvo” ekukochekera.
^ Kana kuti “yeshekeri dzvene.”
^ Kana kuti “mupiro unovheyeswa.”